Uhlalutyo lwee-Wings U29S, i-FPV enokusongelwa eneiglasi zeVR kunye nekhamera ye-HD | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lweeWings U29S, i-FPV enokusongelwa eneiglasi zeVR kunye nekhamera ye-HD
Ngenye imini, kwiActualidad Gadget sikuzisa uhlalutyo lwenye Iidrones ezimnandi kakhulu sinethuba lokuvavanya Ngokuqinisekileyo iya kuba yenye yeemveliso zeenkwenkwezi kwintengiso yeKrisimesi elandelayo. Igama lakhe ngu Amaphiko U29SYenziwe yi-UDIRC Technology kwaye yidrone enokusongelwa exhotyiswe ngekhamera ye-HD evumela ukubhabha kwimowudi ye-FPV kwaye ngenxa yolawulo lwayo oluzenzekelayo lokuphakama kunye nokuma kunye nokukhululeka kokubhabha yeyona nto ilungele abo basebenzisi qala kwindiza yenqwelomoya.
I-U29S sisixhobo esipheleleyo, esine- Ixabiso eliphakathi lijonga ukuba liza neiglasi zeVR kuba sinokuyifumana nge- € 149 kuphela kwi-RCTecnic ngokunqakraza apha. Ukuba uthanda iidrones, siyakumema ukuba ubone i-U29S ngokweenkcukacha kuhlolo lwethu olupheleleyo.
1 Uyilo olusongelayo, impumelelo
2 Ukuqhuba idrone
3 Ikhamera ye-HD kunye ne-FPV
4 Isiphelo, ixabiso kunye nekhonkco lokuthenga
Uyilo olusongelayo, impumelelo
I-U29S yidrone yoyilo ngononophelo, icwecwe, lobukhulu obuncinci kwaye enkosi ingasongwa Kulula kakhulu ukuyihambisa naphi na. Uyilo lwayo lucocekile, luncinci kwaye lunezinto ezisemgangathweni ezinomtsalane omnandi kakhulu. Ubunzima bayo buphakame ngandlela ithile kunokuba kunokubonakala ekuqaleni, okuxabisekileyo xa ubhabha, kuba ivumela uzinzo olukhulu kwaye ikwenze ukuba kube lula ukulawula idrone ngaphandle (ewe, ngaphandle komoya) ubuncinci beziqinisekiso.
Inikwe izibane ezibini zezibane, ezingasemva zibomvu kwaye ezingaphambili ziluhlaza, ezizakusinceda sazi ngalo lonke ixesha apho intloko yesixhobo ikhoyo. Inkqubo ye- Ikhamera ibekwe ngaphambili kwedrone, Iyahlengahlengiswa ukuphakama kwaye inikezela nge umgangatho ophezulu kakhulu kunokuba bekulindelwe kolu luhlu lweedrones, ezixabisekileyo- kunye nokuninzi- xa ubhabha idrone kumntu wokuqala. Ikuvumela ukuba urekhode iividiyo kumgangatho we-HD kwisisombululo se-1280x720p kwaye uzihambise ngesantya se-30 Mbps.
Isikhululo sigcina uyilo olufanayo lwedrone ngenkangeleko encinci kunye nezinto ezisemgangathweni kwaye idibanisa ii-buzzers ukusazisa xa idrone iphelelwa yibhetri okanye xa ikufutshane nokuphelelwa ngumqondiso kwaye kuyacetyiswa ukuba uyisondeze.
Njengento yokuphucula Kulahlekile ukuba isixhobo siza sixhotyiswe ngokhuseleko kwiincakubaUkusukela ekubeni sisiqalo sedrama yolwaluko kusoloko kucetyiswa ukuba kuyikhusele kwiiseshoni zokuqala zenqwelomoya de kube umqhubi wenqwelomoya efumana lula ekuphatheni kwayo.
Isikhululo sinemvakalelo efanelekileyo kunye nobunzima, ke kuyekeke kakhulu ukuqhuba le drone. Ukuthatha izinto ezimbini esinokukhetha kuzo, nokuba kukuqala ngesandla ngokubeka zombini i-jostick ekhomba ezantsi kwaye kwangaxeshanye kwaye uphakamise isixhobo ngesandla nge-lever yokuphakama okanye kungenjalo singasebenzisa Susa ngokuzenzekelayo / iqhosha lokufika ibekwe ngaphambili kulawulo olukude olwenza ukuba kube lula ngakumbi ukwenza lo msebenzi, ngakumbi ngelixa singaziqheliseli ukubhabha le drone.
Nje ukuba isemoyeni idrone izinzile zombini kubude nakwindawo; Pha Iziphumo zenkqubo yolawulo oluzenzekelayo ziyabonakala. Olu ncedo alusincedi kuphela ukuba sibe nolawulo olukhulu kwisixhobo, kodwa luyimfuneko kwakhona xa sithatha iifoto kunye nevidiyo ukuba sifuna ukunqanda ukuba umgangatho uchaphazelekile. Kuza kuxhotyiswa ngeNdlela engenNtloko ukuze i-drone ihlale ihleli ngokuzenzekelayo, eya kwenza ubomi bube lula kubaqhubi beenqwelomoya abatsha.
Gcwalisa ipakethi yedrone, umthumeli kunye neiglasi zeVR
Idrone Inokulingwa kokubini ukusuka kwisikhululo nakwiselfowuni yakho usebenzisa usetyenziso lweFlyingsee kunye nonxibelelwano lweWi-Fi. Ngaphandle kwamathandabuzo, kumnandi ngakumbi ukubhabha nomthumeli kuba ulawulo lucocekile kwaye likuvumela ukuba ulawulwe ngokuchanekileyo ngakumbi. Imowudi yokulinga evela kwi-smartphone inokulunga xa uthatha iifoto okanye urekhoda iividiyo, kuba ikuvumela ukuba ubone ngokulula ukuba yintoni i-drone kwiscreen kwaye ke iya kuba sesifotweni. Ukuba uyayilawula nge-app ine- ukusebenza okunomdla evumela ukuba uzobe umzila kwiscreen esiphathwayo kwaye oko Idrone iqhuba ngokuzenzekelayo loo ndlela.
Ibhetri eyinyusayo inesikhundla esingama-350 mAh, igcwalisa ngokupheleleyo ngaphezulu nje kweyure kwaye ine- malunga nemizuzu esi-7. Ewe, kwiphakheji iza ibhetri eseleyo ukuze ukwazi ukuphatha zombini uhlawulisiwe kwaye uyonwabele idrone yakho phantse imizuzu eyi-15.
Ikhamera ye-HD kunye ne-FPV
Omnye we Amandla ale modeli ngumgangatho wekhamera ye-HD, Iyakwazi ukurekhoda iividiyo ze-HD ngesisombululo se-1280x720p kwaye siyithumele nge-Mbps ezingama-30. Umgangatho wevidiyo kunye nexesha lokuhamba lilunge kakhulu; Kwimeko yethu siyisebenzise nge-iPhone X kwaye inyani kukuba yonke into inamanzi kakhulu kule meko I-FPV inokwenzeka ngokwenene (Kwiidrones ezininzi ezisezantsi kubonisiwe ukuba ivumela ukubhabha kwabantu bokuqala kodwa oku kuyenzeka akunakwenzeka kuba ukubambeka komfanekiso kukhulu kakhulu kwaye kwenza kube nzima ukubhabha ngoluhlobo) ke ukuba ufuna ukuzama le ndlela yokulinga. kwaye ungachithi imali eninzi le drone yenye yeendlela ezizezinye onokuzifumana.
Nje ukuba i-smartphone yakho iqhagamshelwe kwi-Wifi yedrone, uya kuyibona ngokuzenzekelayo ividiyo ngexesha lokwenyani kwiscreen se-terminal. Okwangoku kuya kufuneka ukhethe phakathi umqhubi wenqwelomoya kwimowudi ye-FPV ngokubeka ifowuni yakho ngaphakathi kwiiglasi zeVR okanye yenze eyona ndlela yesiko kwaye ubeke iselfowuni kwiadaptha enesikhululo. Ukhetha, ingcebiso yethu kukuba uqala kancinci kancinci ngemowudi yesiqhelo kwaye wakube unamava ngokwaneleyo zama ukwenza uqeqesho lwenqwelomoya kwimowudi ye-FPV njengoko kunokuba nzima kakhulu kubaqhubi beenqwelo moya abangenamava kwaye ubeka umngcipheko wokuba nengozi.
Isiphelo, ixabiso kunye nekhonkco lokuthenga
Ukuqukumbela, iiWings U29S sisindululo esinomdla kubo bonke abafuna ukukhangela i-drone, elula ukuqhuba kunye nemilinganiselo encitshisiweyo. yakhe Ixabiso li-149 € kwaye konke okubonelelayo (ikhamera ye-HD, imowudi ye-FPV, isikhundla kunye nolawulo lokuphakama, ukusuka ngokuzenzekelayo, njl.) sijamelene nemveliso enomdla kakhulu ene Ixabiso elifanelekileyo lemali. Ukuba ufuna ukuyithenga, ungayenza ngokuthe ngqo kule khonkco ngexabiso elifanelekileyo.
Amaphiko eDrone U29S
Ukuphakama kunye nolawulo lwesikhundla
Incinci ngobukhulu kwaye inokugoqwa
Ubomi bebhetri obulinganiselweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lweeWings U29S, i-FPV enokusongelwa eneiglasi zeVR kunye nekhamera ye-HD
Iividiyo ezintandathu ezimfutshane zeApple Watch kunye nemisebenzi yayo emininzi